Yan Aung: ဘလော့ဂ်ပို့စ်လေးများကို ကြိုရေးပြီး တင်ခြင်း...
တစ်ရက်ထဲ ပို့စ်နှစ်ခုကပ်နေလို့ အချိန်ရွှေ့လိုက်တာနဲ့
schedule ဖြစ်သွားတယ်လေ. အဲဒီတုန်းက သတိထား
လိုက်မိတာ. အင်း..အခု ကိုရန်အောင် ရေးပြမှ ပြန်
အိုဘိုအဲမတ်စ် နိုဒဲ သိုင်းကျူးဒဲဂိုဇိုင်းမတ်စ်.. ဟဟ
အိုကေ.. နယူးရီးယားည အတွက်ကြိုရေးထားရမယ်.
ဟတ်ဟတ်. ရှီကရှီ ပို့ပေးတဲ့သူတွေကကြိုပို့ပေးဦးမှ
ရမှာပါလေ. ဟဟား.. ၀ကရိမတ်စ်က ?
Ja.. mata ne :P
ဘလော့ဂ်ဆိုင်ရာ၊ အိုင်တီဆိုင်ရာ ဗဟုသုတတွေ၊ တခြားပညာပေးဆိုင်ရာတွေ အများကြီး ရသွားတယ်ဗျာ။ ပိုစ့်အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ဒီမှာပဲ ပြောခဲ့တယ်နော်..။
မိတ်ဆွေတယောက်က ဒီပို့စ်ကို link ပေးလို့ ရောက်လာတာပါ။ schedule လုပ်တာ သင်ပေးတာ အဆင်ပြေလိုက်တာ။ စမ်းတော့ မကြည့်ရသေးဘူး။ ကောင်းကောင်း အသုံးဝင်မှာပါ။
အကိုရေ ပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်
ပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်....